အကောင့်ခိုးမယ့်အစား ကျမကိုလာခိုးပါလား လို့ ပြောချလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်ဖူးပွင့်ခိုင်…. – Shwe Naung
အကောင့်ခိုးမယ့်အစား ကျမကိုလာခိုးပါလား လို့ ပြောချလိုက်တဲ့ မော်ဒယ်ဖူးပွင့်ခိုင်….
ပရိသတ် ကြီးရေ ပုရိသတွေရဲ့ အသည်းစွဲ ဆက်ဆီမော်ဒယ် တစ်ဦးဖြစ် တဲ့ ဖူးပွင်ခိုင်ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးလေးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ် ကောက်ကြောင်းအလှ တွေက
ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ထူးခြားမှု တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စားပုံလေးတွေဟာ ဆိုရင်လည်း ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ရေပန်းစား လူကြိုက် များတာ လည်းတွေ့ရပါတယ်။
သူမကတော့ အနုပညာ အလုပ်တွေကို ဆက်လက် လုပ်ကိုင် လျက်ရှိပြီး အောင်မြင်ပြီး ပရိသတ် ချစ်တဲ့ မော်ဒယ်တစ်ဦးဖြစ်အောင် အကောင်းဆုံး ကြိုးစားနေတာကို မြင်တွေ့ရ မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လိုဖက်ရှင် လေးတွေပဲ ဝတ်ဝတ် တစ်နေ့ တစ်ခြား ပိုပြီး ထူးခြား လှပလာတဲ့ ဖူးပွင့်ခိုင်က ပုရိသတွေရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို အပြည့်အဝ ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမိုက်စားကောက် ကြောင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင် ထားတာကြောင့် မိန်းကလေး ပရိသတ်အများစု အားကျချစ်ခင်နေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ ဆက်ဆီ ကျကျ အမိုက်စား ပုံရိပ်တွေကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ်ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။သူမဟာ လတ်တလော မှာတော့ အမိုက်စား လှရက်လွန်းနေတဲ့
အလန်းစား ပုံလေးတွေ ကိုတင်ပေးရင်း အကောင့်ခိုး မယ့်အစား ကျမကိုလာခိုးပါလား😌ဆိုတဲ့ Caption လေးနဲ့ ဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် ဖော်ပြ ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ကဲ….ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွက် ဖူးပွင့်ခိုင် ရဲ့ လှသွေးကြွယ်နေတဲ့ အမိုက်စားပုံ လေးတွေကို မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
Source & Photo Credit : Phuu Pwint Khing Facebook Account
မရမ်းဆိုင်နူးရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ….
ချစ် ချင် စရာ ကောင်း လောက် တဲ့ အလှ တရားတွေ နဲ့ မိ မိုက် လွန်းနေ တဲ့ စစ်ပိုးအိမ်…
သူမရဲ့အမြင် နဲ့ ပက်သက် ပြီး အမျိုး ဘာသာ သာသနာကာကွယ် စောင့်ရှောက်ခြင်း ကို မျှဝေရေးသားလာခဲ့တဲ့ ခင်သဇင်….
ပန်း ခင်း ထဲမှာ အဝါရောင် ခါဝန် လေးနဲ့ အလွန်း မိုက်လွန်း နေတဲ့ နေခြည်ဦး
ကမ္ဘာပေါ်က အဖေတွေ အားလုံးနဲ့ သူမရဲ့အဖေ အတွက် ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်တဲ့ ဆောင်းဝတ်ရည်မေ….